Qurba joog fara badan oo dib ugu soo laabtay dalka iyo qorsho ay lee yihiin (Warbixin iyo Sawirro)
Home Somali News Qurba joog fara badan oo dib ugu soo laabtay dalka iyo qorsho...
Qurba joog fara badan oo dib ugu soo laabtay dalka iyo qorsho ay lee yihiin (Dhageyso Warbixin iyo Sawirro)
Muqdisho Siddii ay ahayd 21-kii sano ee la soo dhaafay:
Magaalada Muqdisho oo 21-kii sano ee la soo dhaafay ay ahayd meel dagaalo iyo fowdo ay ka socdaan, ayaa waxa hadda ka muuqda dib u-dhis iyo dhismooyin fara badan, waxana dalka dib ugu soo laabtay qurba joog badan oo dalka ka maqnaa muddo dhowr sanno ah.
Magaalada Muqdisho oo caasimada Soomaaliya, waxa ay soo martay marxalado kala duwan kala dhibaato badan, waxaa magaalada ay marti u noqotay dagaalo aan kala joogsi lahay, burbur iyo boob aan xad lahayn, taasoo sababtay in dadkii ka baxsan karay colaada hareeyay magaalada in ay u cararaan waddanka dibeddiisa.
Dagaal ogayaal heesta maleeshiyo hubeysan, iyo kooxo Islaamiyiin ah oo carcartan ayaa magaalada isku meertay, taasoo ka dhigtay magaalada meesha ugu daran adduunka.
Qof walba oo ku noolaa xilligaas waxa uu noqday mid ehel u ah ama ugu yaraan ay waxyeelo si yaabo kala duwan uga soo gaartay dhibaatada ka taagneed magaalada.
Haweenka oo la kufsado ama la dhaco, carruurta oo loo adeegsado askar ahaan, ama kuwa badan lagu shaqeysto, iyo hantida rayidka oo la dhaco, Isbaarooyin teedsan magaalada iyo xaafaddaha oo lagu furto shacabka, hoggaamiyaal dagaal oo aan cidna ka amar qaadan, waxa ay noqdeen wax magaalada caan ka noqday.
Waxa intaas dhan uga sii daray burcad-badeed qasadkoodu uu noqday in ay dhaqaale ka helaan maraakiinta ganacsiga iyo kalluunka oo ka afduubta xeebaha Soomaaliya, taasoo markale adduunka tusisay in Soomaaliya ay tahay meel khatar wayn uu ka soo socdo, haddii aan wax laga qaban.
Maxaa isbadal ah oo ka dhashay magaalada 21-sano kaddib?
Si kastaba, Al-Shabaab ayaa magaalada ka baxday labo sano ka hor, waxana magaalada ka dhacay isbadalo waa –wayn, kuwaasoo ay ka dhasheen isbadalka siyaasadda ee ka dhasay magaalada.
Magaalada waxa yimid hey’addo caalami ah, waxa soo booqday madax caalamka ka socda, oo uu ka mid yihiin ra’iisal wasaaraha Turkiga iyo xoghayaha guud ee QM.
Wixii intaas kaddib magaalada waxa ku soo qulqulay qurba joog badan, oo qaar kood 21-kii sano ee dagaalada ay ka socdeen ama ka badan ka maqnaa magaalada.
Waxa ay bilaabeen in ay maalgashi ka sameestaan magalaada, waxa ay qaar badan furteen hoteelo, goobo ganacsiyo oo waayen, dhismooyin badan iyo doobiyo qaali ah oo lagu dhaqo dharka.
Waxa la dhisay wadooyinka burbursanaa waddanka, sidoo kale xeebta Liido ayaa qaar badan waxa ay ka fureen hotelo caalami ah oo lagu kariyo cuntada Soomaalida ay caan ku tahay.
Magaalada waxa lagu arkay baabuuro badan, waxa ay dowladda magaalada ka si feesay isbaarooyinkii yaalay 21-kii sano ee la soo dhaafay kuwaasoo lacago baad ah lagu qaadi jiray.
Diyaaradaha magaalada yimaada ayaa aad u batay, waxana maalintii la sheegay in ka badan 100-diyaarad ay soo fadhiistaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqidsho, waxa kaloo bilowday diyaado aada gobalada waddanka sida Jubbada Hoose, Baay, Hiiran, Gedo, Galgaduud iyo meelo kale.
Dadka hamiga ka leh in isbadalo ay ka sameeyaan Muqdisho waxa ka mid ah:
Codadka Qaar Ka Mid Ah Dadkii Badda Joogay
Isku soo duub afartan qof waxa ay ka mid yihiin dadka magaalada Muqdisho raba in ay ka sameeyaan isbadalo xagga horrumarka ah.
Dhawaan ayaa qaar ka mid ah wariyaasha Shabakadda Midnimo waxa ay ku wareesteen Hotel ku yaalla xeebta Liido ee degmada Cabdul-Casiis ee magaalada Muqdisho shan qof oo seddax ka mid ah ay ka yimaadeen waddamada Yurub, sida Ingiriiska, Sweden iyo Denmark.
Dooddii waxa ay u dhacday sidan:
Ku soo dhawaada dhammaantii Shabakadda Midimo.
Ugu horreyn waxan idiin weydiinineynaa Magacyadiina in qof kasta uu noo sheego halka uu ka yimid
Anniga magaceyga waa Sacdiya Cabdi, Waxa aan ka i-mid London, dhowr iyo tobon sano ayaa igu dambeesay Muqdisho, waxa aan ku arkay marki aan imid isbadal wayn oo xagga nabadda ah iyo dhismooyin la dhisay.
Anniga magaceyga waa Xuseen cabdi Calasoow, waxa aan ka i-mid Sweden waxan ka tagay 2007-dii laakin waxan ahay reer Swden, waxana ahaa ninkii iskalahaa Idaacadda Somaliwayn oo ay dhaceen Al-Shabaab, waxa qorsha iigu jira in aan soo celiyo idaacadda iyo qorshayaal kale.
Anniga waa Cali Faarax Shire, waxa aan ka i-mid Denmark waxa Muqdisho iigu dambeesay 21-sano ka hor laakin labo jeer ayaan horrey u imid 2006-dii iyo 2010-kii waxan rabaa hadda in magaalada aan ka dhiso goobo ganacsi oo muhiim ah sida waxan hadda hotel wayn ka dhisayaa xeebta Liido, marka waddanka ayaa dib ugu soo laabtay waxana rabaa in aan wax badan ka qabto.
Anniga waxan joogay 21-kii sano ee la soo dhaafay Muqdisho, halkan ayaan ku dhahay isla markaana wax ku bartay, waa ay jirtaa marar aan dibedda aaday laakin inta badan halkan ayaa joogay, horta waan ku faraxsanahay in waddanka ay dib ugu soo laabtaan qurba joogta, marka hadda waxan wadaa qorshayaan lagu horrumarinaayo ganacsiga, barnaamiyo waaweyn ayaan wadnaa marka qorshayaal aay lee nahay.
Maxaa Muqdisho ka soo doonteen?
Walaahi qof walba wuxuu rabaa in magaalada ka sameeyo wax yaabo horrumar ah, oo dalka iyo dadka anfacaya, waayo waan soo aragnay in dal aadan lahayn uusan waxbo kugu tareynin ayey yiraahdeen dhammaan dadkii ka yimid waddamada Qurbabaha.
W/Q: Bahda Shabakadda Midnimo ee Muqdisho